Ebe E Si Nweta Casino Online - Online Casino Bonus Code
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị Ịntanetị nke Swedish
(276 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ... Na Jenụwarị 2018 ụdị ịgba chaa chaa niile dị na iwu Sweden. Ego a na mpaghara a bụ nke Svenska Spel nwe obodo, nke e hiwere na 1997 site na njikọ nke ụlọ ọrụ abụọ: Penninglotteriet na Tipstjänst. Svenska Spel na-arụ ọrụ casinos nke ala na mba, yana mpaghara nke lotteries. Dị ka iwu banyere ịgba chaa chaa na Sweden na cha cha cha nwere ike igwu egwu dị ka ruleti, craps na egwuregwu klas, igwe oghere, poker. Nanị ikike nke ịnye egwuregwu niile a nwere Svenska Spel. Maka iwu iwu, nchekwa na ntụkwasị obi nke ahịa ịgba chaa chaa nke Swedish bụ njikwa maka ịgba chaa chaa na Sweden.
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Sweden
Ka ọ dị ugbu a, ịgba chaa chaa n'Ịntanet abụghị iwu. Onye nwe obodo Svenska Spel nwere ikike inye online poker na online bingo. Otú ọ dị, ndị ọkachamara na ịgba chaa chaa mara ọkwa mgbanwe ndị dị na iwu dị ugbu a na ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Sweden, nke ga-enye ohere ịmepe usoro usoro ikikere maka ụdị ndị ọzọ nke ịgba chaa chaa n'ịntanetị.
Ndepụta nke Top 10 Swedish Online Casino Sites
Ịgba chaa chaa na Sweden
Njem anyị taa bụ mba jupụtara n'akụkọ ihe mere eme, nkasi obi na n'usoro - na Sweden. CasinoToplists na-enye gị ohere ịhụ nlegharị anya, ọdịiche na ọdịnala nke mba a magburu onwe ya. Ma, n'ezie, mụta ọtụtụ ihe gbasara cha cha chaa chaa.
Sweden - na ọnọdụ na nnọọ a bit nke akụkọ ihe mere eme;
wuru na obodo ukwu dika Sundsvall), Malmö, Gothenburg na Stockholm, isi obodo obodo ahu;
Afọ 20 + uwe ejiji.
Ebe ise dị na Stockholm Sweden na adreesị isi obodo;
Ezigbo mmasị banyere Sweden na ndị bi na ya.
Ebe Sweden na obere akụkọ ihe mere eme
Sweden dị na Northern Europe na mpaghara ọwụwa anyanwụ na nke ndịda nke Scandinavia. N'ebe ọdịda anyanwụ, ókèala dị nso Norway , na n'ebe ugwu-ọwụwa anyanwụ - na Finland . site Denmark iji kewaa Straits Öresund, Kattegat na Skagerrak.
Ọganihu nke mba ahụ nwetara na narị afọ 17th, mana enweghi ike ịnọgide na-edu ndú ya n'ihi Northern War na Russia. Na 1809, Sweden nwere furu efu ụfọdụ n'ime ógbè ọwụwa anyanwụ ya, ma nwee mmetụta na Finland. Sweden anọwo n'akụkụ Germany na n'akụkọ ihe mere eme enyerela gọọmenti aka ugboro ugboro, gụnyere oge Agha Ụwa nke Abụọ.
Cha cha na ịgba chaa chaa na Sweden
Swedes bụ ndị bara uru ma ana m anwa inweta uru niile, ma ọ bụ mkpofu ahịhịa ma ọ bụ ego na ịgba chaa chaa. Na mba ị nwere ike igwu egwu, mana n'okpuru steeti. Ya mere, na 1999, a na-ewu ụlọ ọkụ 4 n'obodo ukwu ndị dị na mba ahụ: Sundsvall (wughachi site na ụlọ ụlọ) , Malmö , Gothenburg na isi obodo, Stockholm. Nke a bụ nnukwu cha cha nke mba «Casino Cosmopol Stockholm». Ọ meghere na nso nso - na March 2003 ma ị nwere ike ịchọta ya na adreesị Kungsgatan 65. N'ebe a, ị ga-enwe ike igwu egwu na Roulette, yana n'ime Blackjack , Caribbean Stud na Baccarat. A na-emegharị asọmpi cha cha chaa chaa na oge. Na poker ị nwere ike igwu ma tupu e dekọọ na ekwentị, ma sonye na ụbọchị egwuregwu. A na-atụ anya ndị ọbịa kwa ụbọchị site na 13.00 ruo 5.00 n'ụtụtụ.
Igwe cha cha nwere njedebe nke onwe ya: ị ga-abụ 20 ma ọ bụ karịa (ga-eleba paspọtụ gị n'ọnụ ụzọ) na ejiji aghaghị ịgbaso echiche nke smart-casual (smart casual). Biko mara na euro na-ejikarị eme ihe na Sweden, n'ebe ahụ na-arụ ọrụ ego ya - Swedish krona.
Ebe nkiri Stockholm
– Vasa Museum . Adreesị ihe ngosi: Galärvarvsvägen, 14. Nke a bụ ihe ngosi nka pụrụ iche, na ụgbọ mmiri e chebere kemgbe narị afọ 17. Site n'ụzọ, naanị otu n'ime ụwa. 95% nke ihe ọ bụla a pịrị apị na ihe oyiyi a na-echekwa na ụdị mbụ ha. Ugbu a, ụgbọ mmiri ahụ na-eme ihe ngosi nka, ebe ị nwekwara ike ile ihe nkiri banyere ihe ngosi ahụ (na 16 asụsụ).
– Ememe Alfred Nobel . Adreesị: Börshuset, Stortorget, Gamla stan. N'ebe a, ihe ngosi nke ndị mmeri nke 800 abụghị nanị icho mgbidi ahụ, na ịkwagharị ụdị ọrụ n'ime nhicha. Nke a bụ atụmatụ na-adọrọ mmasị nke ọma ọ bụghị nanị na-enye aka ịchekwa ohere na ihe ngosi nka. Ma otu ugboro, ọ na-echeta na ụlọ ọrụ ihe ngosi ahụ raara onwe ya nye maka ihe omumu sayensị. E nwekwara ụlọ ọrụ mmekọrịta ebe ndị okenye na ụmụ nwere ike ikwughachi ụfọdụ n'ime ihe ndị ọ chọpụtara.
– "Museum nke Skansen". Adreesị: Djurgardsslatten 49-51. Gaa na Sweden niile ruo awa ole na ole n'elu ikuku? Ngwa ngwa! Na ihe niile a ekele ụlọ ihe ngosi nka nke Swedish omenala "Skansen". Lee ụlọ na ala nke 18-19 ọtụtụ narị afọ. Na mpaghara nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ ihe ngosi nka na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị, ị nwere ike lelee otú ndị na-ekpuchi ọkụ, ndị na-eme achịcha na ndị na-ese iko.
– "Museum nke Junibacken". Ebe: agwaetiti Djurgarden na Stockholm. Ọ bụ ihe ngosi nka nke akụkọ a ma ama nke Astrid Lindgren na paradaịs maka ụmụaka na ndị fans niile nke ọrụ ya.
Ezigbo mmasị banyere Sweden na Swedes
Na Sweden e nwere ihe karịrị 300,000 ndị mmadụ na nna nna Carlson / Karlsson;
NDỤMỌDỤ AHỤ N'ỤLỌ NCHE - afọ 26;
Ọ bụ nnukwu ụtụ isi - 22% nke uru;
Ke Sweden e nwere "Ice Hotel» - «ICEHOTEL». Ebe 200 dị n'ebe ugwu nke Arctic Circle n'obodo Jukkasjarvi bụ "ezigbo ice". Ọ rụghachiri kwa afọ, n'ihi na ọ bụ naanị mmiri iyi si na iyi. N'ebe a, ị nwere ike ịmepụta ihe a kpụrụ akpụ nke ice, gaa na ice azụ, ma bụrụ onye akaebe maka aurora borealis;
"Snus" - ụtaba a na-agba nro. Swedish a na-etinye ya n'okpuru egbugbere ọnụ elu ma jiri ya na-aṅụ sịga;
Nri kachasị mmasị bụ teba pizza (anụ, cheese, mgwakota agwa na ihe oriri pụrụ iche maka kebabs). Ọtụtụ mgbe, ụlọ ezinaụlọ kama iri nri abalị, nwere mmasị ileta ụlọ ahịa ndị dị nso ma ọ bụ ngwa nri ngwa ngwa;
Ndị otu narị afọ na narị afọ isii nke ndị Sweden - atụle ndụ ugbu a karịrị afọ 80 (otu n'ime ihe kachasị mma maka Europe dum);
Swedes na-eche banyere ihe onwunwe nke mba ya ma jiri ike na-eme ihe n'ụzọ amamihe. Dịka ọmụmaatụ, na obodo Borås ọkụ eletrik na-eji ọkụ eme obodo (ụlọ 60,000, 10% nke ike a chọrọ). Igwe ehicha adịghị ma ọlị - a na-eji ebe a na-asa ákwà na-ekesa.
Sweden na map nke Europe
0.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Sweden
0.2 Ndepụta nke Top 10 Swedish Online Casino Sites
3 Ịgba chaa chaa na Sweden
3.0.1 Ebe Sweden na obere akụkọ ihe mere eme
3.1 Cha cha na ịgba chaa chaa na Sweden
3.1.1 Ebe nkiri Stockholm
3.1.2 Ezigbo mmasị banyere Sweden na Swedes
3.1.3 Sweden na map nke Europe